पोषण र खोपमा गरेका लगानीबाट १६ गुनाभन्दा बढी प्रतिफल – Kalopati
काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्चका कारण जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनी जान बाध्य हुने गरेका अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा प्रा. डा. श्यामप्रसाद लोहनीले विश्वमा स्थास्थ्यमा गरिने खर्चका कारण १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको दुश्चक्रमा धकेलिने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । आर्थिक हिसाबले सम्पन्न अमेरिकालगायत मुलुकमै पनि गम्भीरखालका रोगको उपचार निकै महँगो भएका कारण धेरै जनताको आर्थिक अवस्था कल्पना नै गर्न नसकिने ढङ्गबाट खस्केको जानकारी दिइयो ।
प्रा डा लोहनीले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो छ, हेलमेटमा गरेको एक रुपैयाँ खर्चले रु १३ बचाउँछ ।” स्वास्थ क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनालगायतका घटनालेसमेत प्रभावित तुल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कारोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका ३८ प्रतिशत जनशक्ति कुनै न कुनै रुपमा तनाव, डिप्रेशन, अनिन्द्राको समस्या झेल्नु परेको एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । रासस
सडक निर्माण गर्ने स्थान खाली नहुँदा सुरु भएन चक्रपथको दोस्रो खण्डको काम